Tinye ego na ndị mmadụ. A gaghị ewepụ gị. | Martech Zone
Tinye ego na ndị mmadụ. A gaghị ewepụ gị.
Egwuregwu m na ndị egwuregwu ole na ole na-atọ ọchị na kemgbe m gbara alụkwaghịm (na mgbasa nke akụ m niile nke ụwa), ejiriwo m afọ 5 ikpeazụ m tinye ego na ndị mmadụ. Nke ahụ nwere ike ịdị ka nnukwu ihe ijuanya, na olile anya na ọ bụghị ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, mana echere m na site n'itinye uche m na ndị ndụmọdụ, ndị enyi, na ezinụlọ - na m ga-ebi ndụ na-amị mkpụrụ.
Otu enyi m, Troy, jụrụ m n'abalị ụnyaahụ ihe ọ bụ na m na-ejikarị oge m atụgharị uche na ya. 5 ma ọ bụ 10 afọ gara aga, ọ nwere ike ịbụ ọrụ, ego, ma ọ bụ 'egwuregwu' ọzọ. Mana m ji obi eziokwu zaa ya na ọ bụ ụmụ m. Nwa m nwoke na-enyocha ụfọdụ mmemme na IU ma ọ ga-abụ agadi. Nwa m nwanyị amalitekwala ịkpụzi echiche ya maka ọdịnihu - na-eche maka ime mma ma ọ bụ nka na nka. Obi abụọ adịghị ya na ihe ọ bụla ụmụ m mere na ha ga-eme nke ọma na ya. Mgbe ụfọdụ ụmụ m na-eme mkpesa banyere oge niile m na-etinye na kọmputa ma ọ bụ na-arụ ọrụ - mana eziokwu bụ na enweghi oge dị ukwuu na-agafe ụbọchị m na-enweghị atụgharị uche na nna m bụ onye a gọziri agọzi.
Ndi bekee chere na umu m di nnukwu nihi m. Nke ahụ mere m ka m chịtụ ọchị… Echeghị m na nke ahụ bụ ikpe ma ọlị. M na-na-adịbeghị anya gbara site mentors magburu onwe, ndị enyi, ezinụlọ na mgbe ụfọdụ ndị ọkachamara na-enyere m aka ịzụlite ụmụ m. Na kwa, ha nwere nne na-atụ ụjọ bụ onye kọwaara ha ihe mere ya ngwa ngwa iji nyere ha aka inweta nghọta ka ha ghara itinye onwe ha na mkpebi dị otu ahụ na ndụ ha. Nye m, nke ahụ bụ ego ga-akwụ ụgwọ karịa dollar ọ bụla m ga-enweta na ndụ. Aga m enwe obi ụtọ ibi ndụ nke ịda ogbenye ma ọ bụrụ na m mara na ụmụ m, ezinụlọ m, na ndị enyi m nwere obi ụtọ.
Yabụ… ndị ahụ bụ itinye ego m na ndụ. Echere m na m nwere ihe gbasara saịtị 30 ugbu a ka m na-akwado ndị enyi na ezinụlọ. Ọ bụ ihe m na-enweghị oge dị ukwuu ime dị ka m ga-achọ, mana m na-agbalị iji ike m nwere ike ime ihe kachasị m mma. Ọ bụ obere ego m nwere na obi ụtọ ha.
Taa, m malitere blog maka otu enyi m, Pat Coyle. Pat bụ onye m nwere obi ụtọ iso ya rụọ ọrụ ọnwa ole na ole. Ya nghọta na ezinụlọ, Chineke, ọrụ, na ahịa bụ ihe m n'anya dị ka a enyi. Enweghị m ike ịgwa gị ọtụtụ ihe m mụtara na ọ masịrị m isoro Pat rụọ obere oge m rụrụ. Ya mere,… M tụbara ulo oru mbo ụzọ ya… etinye a blog na http://www.patcoyle.net. A na-akpọ blog Pat 'Ndụ M dịka Onye Ahịa'. Ikekwe ọ bụ ntakịrị ịchọ ọdịmma onwe ya nanị na-edebe blog Pat ma na-agbagọkwa ogwe aka ya ịnọgide na-ezipụ! Eziokwu bụ, Achọrọ m inweta ndụmọdụ ndị ọzọ n'aka Pat nke m na-enweta kwa ụbọchị mgbe mụ na ya na-arụ ọrụ! Kedu ụzọ - Enwere m olileanya na ị ga-enyocha blọgụ Pat.
Na-etinye ego na ndị mmadụ! Agaghị ewepụ gị.
Tags: ndị ọrụ nchịkwa mmadụegondị mmadụ
Ilu na njikwa ngwaahịa